ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်များအတွက်ပေးဆောင် | USAHello ကနေပညာရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
ကောလိပ်ကအရမ်းစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်. USA တွင်ကျောင်းသားများကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ဘို့ဒါဟာကောလိပ်၏ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့်ကြွေးမြီပမာဏနှင့်အတူလွယ်ကူသည်. ကောလိပ်ကျောင်းများအတွက်ပေးဆောင်ဘို့အများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်, သို့သော်. အစိုးရချေးငွေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါ, ပုဂ္ဂလိကချေးငွေများ, ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ပညာသင်ဆု.
အချို့သောကျောင်းသားများကအစိုးရအနေဖြင့်ချေးငွေများနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းများအတွက်ပေးဆောင်. အများအပြားကျောင်းသားများအတွက်, ဒီကောလိပ်များအတွက်ပေးဆောင်သည့်အခါသူတို့ကြည့်ရှုပထမဦးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအစိုးရဆီကချေးငွေလျှောက်ထားသည့်အခါ, သငျသညျအတိုးနှင့်အတူပိုက်ဆံပြန်ဆပ်ရန်ရှိသည်. ဒါဟာသင်ကဆက်ပြောသည်အပိုငွေနှင့်ပြန်ဆိုလိုတယ်. အတော်များများကဘွဲ့ရသူတို့ရဲ့ကျောင်းသားချေးငွေများကိုပြန်ပေးဆောင်နှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်း.
အစိုးရဆီကချေးငွေလျှောက်ထားရန်, သင်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည် ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသား Aid ကိုအခမဲ့လျှောက်လွှာ (FAFSA). အဆိုပါ FAFSA Completing အလွန်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်. သင်ကူညီမယ့်ကျောင်းကတိုင်ပင်ရှာတွေ့စေခြင်းငှါ.
ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ပညာသင်ဆု အကျိုးကိုခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးကြောင်းဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများမှာ. low-ဝင်ငွေမိသားစုများကသူတို့ကိုကောလိပ်များအတွက်ပေးဆောင်ကိုကူညီထောက်ပံ့ငွေသို့မဟုတ်ပညာသင်ဆုရရှိနိုငျ. ထောက်ပံ့ငွေဖက်ဒရယ်အစိုးရသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရဆီကလာနိုငျ. USAHello များစာရင်းကိုရှိပါတယ် ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ပညာသင်ဆု. သင်သည်သင်၏ကောလိပ်ကနေနှင့်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းကနေမဆိုပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
ပုဂ္ဂလိကချေးငွေအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ချေးငွေများဖြစ်ကြောင်း (ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်များအဖြစ်) သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် - သင့်မိသားစုတစ်စု၏ဥပမာမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး. ပုဂ္ဂလိကချေးငွေတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်မြင့်မားအတိုးနှုန်းများ. သငျသညျကောလိပ်အခကြေးငွေသို့မဟုတ်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပိုက်ဆံချေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခင်မှာ, သင်တစ်ဦးသည်ကျောင်းတိုင်ပင်သို့မဟုတ်သင်ကူညီခြင်းနှင့်သင်ချေးငွေများနားလည်သေချာအောင်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကမှစကားပြောသင့်တယ်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့်ချေးငွေများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုဖတ်ပါ.
အချို့သောကျောင်းသားများသည်ကျောင်းအခြိနျပိုငျးသွားအခြိနျပိုငျးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ကောလိပ်ကျောင်းများအတွက်ပေးဆောင်. တခါတလေ, ကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားများကသူတို့ကိုကျောင်းဝင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထောက်ပံ့ငွေပေးတော်မူမည်နှင့်ထံမှပေးဆောင်ရ ဖက်ဒရယ်လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာမှု ရန်ပုံငွေများ. သငျသညျကောလိပ်တက်ရောက်ရန်နိုင်အောင်ဒါမှမဟုတ်သင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နာရီရှိကြောင်းကျောင်းဝင်းချွတ်တဲ့အခြိနျပိုငျးအလုပ်ရှာလို့ရပါတယ်.
ဒါဟာသင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကောလိပ်သွားဖို့အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, သင်တစ်ဦးမိသားစုအထူးသဖြင့်လျှင်. သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာပညာသင်ဆုနှင့် FAFSA မှတဆင့်လျှောက်ထားသေချာအောင်လုပ်ပါ.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေး – ဘယ်လိုပြန်ကျောင်းကိုသွားကြဖို့